Indlu entle kwiziko leMirepoix: iterrace + yokupaka
Ifulethi elihle kwisakhiwo esineminyaka engama-800 ubudala kumbindi weMirepoix, ebekwe kwindawo efanelekileyo kumda weBéal canal kunye nokuhamba imizuzu embalwa ukusuka ePlace des Couvert, iivenkile kunye neeresityu.
Ngaba uyathanda ukuhamba, ukunyovwa, ukuqubha, ukunyoshoza? Okulandelayo ukuya ngaselwandle, ukuba zintle kwazo kweenxweme ukumsindisa kunye kufuphi greenway, kuba yindawo efanelekileyo ukuze ukuphonononga ummandla lethu elihle: Lake Montbel, Foix, eKamon, zasePyrenees, inqaba Montségur, Roquefixade, Carcassonne njl
Wamkelekile kwiGîte de Béal! Indlu yalungiswa ngo-2021, inamagumbi okulala amabini aneebhedi ezimbini + ibhedi yesofa yomntu omnye. Igumbi lokuhlala elikhulu elivulekileyo elinekhitshi elivulekileyo nelixhotyisiweyo linika ukufikelela ngokuthe ngqo kwi-semi-yabucala yeterrace ecaleni komjelo, ukonwabela amaxesha amnandi.
Igumbi lokuhlambela kunye nendlu yangasese eyahlukileyo.
Ukupaka imoto enye. Iindawo zasimahla ziyafumaneka kufutshane nendlu.
Indawo yethu inamkela njengesibini, nabahlobo okanye nosapho!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mirepoix